न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ? - व्यक्तिगत विकास क्याफे
न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ?
पोस्ट व्यवस्थापक | सेप्टेम्बर 15, 2020 | NLP लेख, एनएलपी |0|
1 न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ?
1.1 न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ?
न्यूरो भाषिक प्रोग्रामिंग वा NLP भर्खर आईपुगेको त्यस्तो चीज होइन। न्युरो भाषिक प्रोग्रामिंग १ 1970 s० को दशकमा रिचर्ड ब्यान्डलर र जोन ग्रिन्डर द्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
त्यो विज्ञान वा अभ्यास बनाउँछ 40 वर्ष पुरानो। यद्यपि धेरै मानिसहरू एनएलपी के हो र एनएलपी न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने बारे निश्चित छैन।
पल जेड स्कट द्वारा
NLP भनेको के हो सुरू गरौं? एनएलपी भनेको न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग हो, जुन सुन्दर देखिन्छ जस्तो लाग्छ? साधारणतया भन्ने हो भने एनएलपी उनीहरूको जीवनमा सफल भएका व्यक्तिहरूको अध्ययन गरेर विकसित गरिएको हो। तिनीहरू हामी, म र तपाईं बाँकी भन्दा बढी सफल किन?
उनीहरूले प्रशिक्षण वा 'प्रोग्रामि' 'को माध्यमबाट भाषा प्रयोगको प्रतिक्रिया दिन (' न्यूरो 'बिट) सिकेका छन्।
एनएलपी यी सफल सञ्चारकर्मीहरू र उच्च प्राप्तकर्ताहरूले प्रयोग गर्दछन् उनीहरूको जीवनको खास पक्षहरूलाई सफलताको लागि अधिकतम बनाउन। तपाईंले आफैलाई सोधिरहनु भएको प्रश्न के तपाईं यी विधिहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ - अवश्य!
यी व्यक्तिहरूको गोप्य कुरा थियो कि उनीहरूले यति धेरै साझा गरेका छन्, धेरै व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा एनएलपी अभ्यास गर्दै छन् र लाभहरू अनुभव गरिरहेका छन्। केही व्यक्तिले तालिम लिन रोज्छन् ताकि तिनीहरू विशेषज्ञ बन्न सक्छन् र यसरी अरूलाई मद्दत गर्छन् केहि व्यक्तिहरू फोबियाको लागि द्रुत उपचार चाहान्छन्, अरूले तौल घटाउन चाहेमा।
तपाईंले टिभीमा डेरिन ब्राउन (sic) देख्नुभयो? उहाँ एक मास्टर व्यवसायी बन्नुभएको छ धेरै NLP प्रविधिको प्रयोग गरेर उनीहरुका मानिसहरु र उनीहरुका विचारधारामा। वास्तवमा, NLP अक्सर सम्मोहन, मंच जादू वा दिमाग नियन्त्रण को एक रूप को रूप मा संदर्भित छ।
त्यहाँ धेरै सन्देपकारीहरू छन् जसले केवल सोच्दछन् कि यो छलकपट वा जादू हो, तर वास्तविकता यो हो कि यी प्रविधिहरू वास्तविक हुन् र ती सबैले सिक्न सक्छन्।
त्यसोभए, जब न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने प्रश्नलाई विचार गर्दा, तपाईंले आफैलाई अर्को सोध्नु पर्छ: तपाईं आफ्नो जीवनमा के परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ? एनएलपी तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रियजनहरूसँगको तपाईंको सम्बन्ध सुधार गर्ने वा भेट्न र नयाँ साथीहरू बनाउन।
प्रविधीहरू तपाईको कामको जीवनलाई सुधार्न, तपाईको क्यारियरमा सफल हुन, वा तपाईलाई त्यो सपनाको जागिर पाउन तपाईले आफ्नो अन्तर्वार्ता प्रविधिको सुधार गर्न मद्दत गर्नु भएको हुन सक्छ वा तपाईले एउटा पदोन्नती वा एउटा वेतन वृद्धिमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ।
NLP तपाईंको स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ तपाईंलाई धूम्रपान छोड्न, वजन घटाउनुहोस् र त्यो सपनाको शरीर पाउनुहोस्। NLP सफलतापूर्वक दैनिक दुनिया भर मा प्रयोग गरीन्छ उनीहरूको ल .्गडा फोबियाका मानिसहरूलाई निको पार्नुहोस्। तपाईंले सिक्न सक्ने सीपहरू र प्रविधिहरूले तपाईंलाई तनावको स्तरमा उल्लेखनीय कमी ल्याउन सक्षम गर्दछ, अन्तमा तपाईंलाई आराम गर्न र अलि जीवनको आनन्द लिन सक्षम गर्न सक्षम गर्न!
NLP व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विस्तृत श्रृंखलामा प्रयोग गरीन्छ: परामर्श, मनोचिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रचनात्मकता, कानून, व्यवस्थापन, बिक्री, नेतृत्व र प्यारेन्टिंग। एनएलपी हामी सबैको लागि उस्तै समान उपयोगी छ जसले अझ इनामदायी जीवनको चाहना गर्दछ।
कसरी एनएलपी न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग प्रयोग गरिन्छ बारे अधिक जानकारीको लागि कृपया भ्रमण गर्नुहोस् INLP केन्द्र.
हाम्रो एनएलपी संसाधन पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् जहाँ हामीसँग केहि उत्कृष्ट पुस्तकहरू, डीभीडीहरू, एमपी3हरू छन् जुन तपाईं एक क्लिकको साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं एनएलपी व्यवसायी बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने, भ्रमण गर्नुहोस् INLP केन्द्र जसले एनएलपी प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण अवसरहरूको दायरा प्रस्ताव गर्दछ।
तपाईंसँग केहि सुझावहरू छन्, तपाईले साझेदारी गर्न चाहानु भएको सुझावहरू? हुनसक्छ तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् जुन तपाईं उत्तर दिन चाहनुहुन्छ, उपयोगी लेख वा टिप्पणीहरू जुन अरूलाई सहयोगी हुनेछ - केवल विषयको जवाफ दिन तल हाम्रो फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
पछिल्लोसपना ठूलो र कडा परिश्रम
अर्कोHome Mum (WAHM) मा एक काम हुनु एक क्यारियर विकल्प हो